Artiist Hawwii Tazarraa: "Ani Qaammeen kan Oromoo akka ta'ettin beeka" - BBC News Afaan Oromoo
Artiist Hawwii Tazarraa: "Ani Qaammeen kan Oromoo akka ta'ettin beeka"
12 Fuulbana 2019
"Qaammee sirbuu deemeen sareen na ciniinte"
Godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa naannoo warshaa Simintoo Mugaritti dhalattee guddatte.
Barumsa kutaa tokkoffaa hanga shanaffaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Mugaritti, kutaa shanaffaa hanga saddeettaffaa immoo magaala Amboo mana barumsaa Addis Katamaatti baratte.
Hojii muuziqaa bara 1997 baandii Hora Ambootti makamuun eegalte. Fedhiin muuziqaaf qabdu gara hojichaatti akka seentu sababa ta'uu himti.
Baandii dubartoota qofaa qabu, badhaasa Siinqee, ayyaana Qaammee fi dhimmoota biroo irratti turtii Artiist Hawwii Tazarraa fi BBC Afaan Oromoo kunooti.
"Yeroon baandii Hora Amboo keessa ture magaala Finfinneetti sagantaaleen garaagaraa yoo jiraatan gara Finfinneetti dhufee artist Sayyoo Dandanaa walin weellisaan ture" kan jettu artiist Hawwi Tazarraa bu'aa bahiin keessa baate heddu ta'uusaa nutti himte.
Gumaachi artiist Sayyoo Dandanaa hojii aartiishee keessatti qabu olaanaa ta'uusaas dubbatti.
Buqqisaa - jala bultii bara haaraa Salaaletti
Sirboota artiistoota akka Sittiinnaa, Abbabach Daraaraa fi Aster Waldagabreel waltajjiilee irratti sirbuun hojii muuziqaatti kan madaqte Hawwiin sirboota godinaalee Oromiyaa garaagaraa sirbuun dhaggeeffattootashee biraan geesseerti.
Yeroo ammaas albamii haaraa hojjechaa akka jirtu nutti himte.
Qincee yaa bittinooftuu
Waggaa malee hin deebitu
Qaammee yaa sissinooftu.. jetti artiist Hawwi Tazarraa
"Qaammee fi Gubaan ayyaanawwan baay'ee hawwatoo Oromoon kabaju dha. Ayyaanni Gubaa ayyaana dhiiraati. Qaammeen immoo ateetetu itti facaafatama, ayyaana dubartiiti" jetti.
Ayyaana Qaammee si'aayinaan kabajaa turuushees himti.
"Maatin koo haala hoo'aa fi bareedaadhaan ayyaana Qaammee kabaju. Qunnii buqqisee sirbee beeka."
"Ani baay'ee xiqqoo ta'een sirbe. Gaafan yeroo jalqabaaf sirbuu deeme sana sareen miila na ciniinte. Sana booda deebi'ee hin sirbine" jetti Hawwiin.
Goodayyaa suuraa Shamarran wayita Qunnii buqqifatan
Hawiin sirba Qaammee sirbuunis beekkamti. "Wantuman argaa fi sirbaa gudhadhen sirbe" jechuun nutti himte.
Iyyoo yaa abaabo birraa yaa daanguulewoo
Kashii yaa kashii… kashii yaa kashii
kashii yaa kashii… Kashii goommanaa
Durba maa jibbu… Durba maa jibbu
Gatii loon lamaa… qarshii soddomaa
Iyyoo yaa abaaboo birraa yaa daanguulewoo...jechuun sirbaa akka turte nutti himte.
Sirbii yeroo Qammeetti dubartootaan sirbamu yeroo ammaatti akka yeroo duriitti baay'inaan akka hin sirbamne Hawwiin gaabbidhaan dubbatti.
"Aadaa amantaa fi maallaqa wajjin walqabsiisuutu jira. Shammarranis mataa dhahatanii magaala keessa deemaa sirbuuf itti qaanfatu" jetti.
Kanaafis aadaa kana baraaruu fi badiirraa hambisuuf hundi irratti hojjechuu akka qabu Hawwiin dubbatti.
Badhaasa Siinqee fi Baandii Dubartoota Qofaa
Artiist Hawwii Tazarraa artiistota fi ogeeyyii digdama ta'an walitti fiduun ji'oota muraasa dura baandii Hawwii Tazarraa jedhamu hundeesiteetti.
Miseensootni baandichaa, taphattootni meeshaalee muuziqaa, shubbistootni akkasumas weellistootni hundi dubartootadha.
Sababa baandii dubartoota qofa of keessatti qabate itti hundeessite yeroo gaafannettis "dubartootni aarsaa hunda kaffalaa turanillee iddoon hin kennamuf. Waltajjiilee irrattis yeroo faarfaman hin mul'atu," jechuun deebiste.
"Kanaafis nutis qixxee dhiirolii aadaa kana guddisuu akka dandeenyu agarsiisuuf baandii kana dhaabne" jetti.
'Push-up' MM, Koyyee Faccee, ET302, Fonqolcha... 2011 dudduubatti
Hawwiin maqaa 'Badhaasa Siinqee' (Sinqe Award) jedhuun dubartoota ciminaa fi kutannoo isaanitiin milkaa'an, dhiibbaa kan uuman fi kanneen biroof fakkeenya ta'an badhaasus eegaltee jirti.
Badhaasa Siinqee ji'a Mudde bara 2011 qophaa'enis artiistotni dubartoota akka Ilfinash Qannoo, Haallo Daawwee fi Hangaatu Baalchaa badhaafamanii turan.
Badhaasni Siinqee bara 2012 Mudde bara 2012 kan kennamu yemmuu ta'u artiistotaan cinatti atileetotni dubartootaas sirna badhaasichaa keessatti ni hirmaatu.
Bara Haaraa Itoophiyaa: Buqqisaa - jala bultii bara haaraa Salaaletti